रुखकटहर खेती गर्ने तरिका Nepalpatra रुखकटहर खेती गर्ने तरिका
९ आश्विन २०७६, बिहिबार
रुख कटहर नेपालमा तराईदेखि पहाडसम्म हुने विभिन्न नामले चिनिन्छ, कटहर, रुखकटहर, काँडेफल आदि । संसारका फलहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो फल कटहरको हो । यो फल विशेष गरी तरकारीमा प्रयोग हुने भएकोले धेरै उपयोगी मानिन्छ । यस्को गुदी कोया सुगर र भिटामीनहरूको मूख्य श्रोत हो । यसको बीउमा प्रोटीन, कार्वोहाइड्रेट र खनिज तत्वहरू पाइन्छ । यस्को फलमा भिटामीन ए र सीको साथै अनैकौ खनिज तत्वहरू पाइन्छ । यसको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व रहेकोले पनि उपयोगिता बढेको छ । यी सबै विशेषताहरूले हाल देखा पर्ने खाद्यान्न संकटलाई तथा कुपोषण समस्यालाई समाधान गर्न अति उपयोगी सिद्ध हुने छ ।
विभिन्न ग्रीष्मकालीन फलहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण फल हो । यो नेपाल बाहेक भारत, वर्मा, सिलोन, दक्षिणी चीन,मलाया, श्रीलंका, केनया, युगान्डा, मलेशिया, फिलिपिन्स, थाइलैण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, ब्राजिल, ग्रीष्म अमेरिका, बेस्ट इन्डीज आदि देशहरूमा खेती गर्ने गरिन्छ ।
रुखकटहर कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो ?
रुखकटहरको वृद्धि र विकासको लागि कतिसम्मको तापक्रम उपयुक्त हुन्छ ?
रुखकटहरको खेती गर्न वार्षिक वर्षा कतिसम्म हुनु आवश्यक छ ?
रुखकटहर खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
रुखकटहरको बिरुवा कुन तरिकाले लगाउन उपयुक्त हुन्छ ?
रुखकटहरका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
रुखकटहरको बगैंचा स्थापना गर्दा रेखाङ्कन गर्न किन जरुरी छ ?
रुखकटहरको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाड्ल खन्नु पर्दछ ?
रुखकटहरको बिरुवा रोप्दा बिरुवा रोप्ने फ्ल्याक वा प्लान्टिङ्ग बोर्डको किन आवश्यक पर्दछ ?
रुखकटहरको बगैंचामा सिंचाई गर्न जरुरी छ ?
रुखकटहरमा मलखादको व्यवस्था कसरी गर्न पर्दछ ?
नेपालमा रुखकटहरका प्रचलित जातहरु कुन कुन हुन् ?
नेपालमा खेती भैरहेका रुखकटहरका जातहरुको बारेमा जानकारी गराई दिनु हुन्थ्यो कि ?
प्रशोधनका लागि पनि कुनै जात छन् ?
रुखकटहरका बिरुवा प्रसारणको लागि कुन विधि अपनाइन्छ ?
रुखकटहरको बगैंचामा अन्तरबाली लगाउन सकिन्छ ?
रुखकटहरको फललाई कुन कुन रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
रुखकटहरलाई छिटो पकाउन परेमा कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला ?
यसको फललाई कसरी भण्डारण गरिन्छ ?
फललाई भण्डारण गर्न र टाढा बजारको लागि ढुवानी गर्न फल परिपक्व अवस्थामा पुग्ने बित्तिकै टिप्नु पर्दछ। पाकेको फल ढुवानी गर्न र भण्डारण गर्न मिल्दैन। फललाई ११-१२ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा र ८५ देखि ९० प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रतामा १-१.५ महिनासम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ।
रुखकटहरको प्रति बोट कति उत्पादन हुन्छ ?
रुखकटहरमा गवारो कीराले कसरी नोक्सानी पुर्या उँछ र यसको रोकथाम विधि के छ?
रुखकटहरमा कस्ता कस्ता रोगहरु लाग्दछन् ?
रुखकटहरको गुलाबी/पिंक रोग कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
गुलाबी/पिंक रोगको रोकथाम कसरी गर्नु पर्दछ ?
रुखकटहरको फल कुहिने रोगको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ ?
फल कुहिने रोगको रोकथाम कसरी गर्नुपर्दछ ?
बोटमा फल लागिसकेपछि कलिला फलहरुलाई डाईथेन एम-४५ वा वेभिष्टिन २-३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई १०-१५ दिनको फरकमा २-३ पटक स्प्रे गर्‍यो भने रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ।
कोरोना खोप कहाँबाट कति, कति आउन बाँकी ?